Fanjakan'ny tigra ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Fanjakana Tiger
Fanjakan'ny tigra (fanjakan'i Tiger), Phuket
Ny fijerin'ny fanjakan'i Tiger. Vidin-javatra.
Fanjakan'ny tigra ao amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsarin'i Tiger
Fanjakana Tiger Review (Google reviews)
Ny fijerin'ny fanjak'ireo Tigers (Tripadvisor.ru)
Fanjakan'ny tigra (fanjakan'i Tiger). Overview
Io fisintonana io dia niseho tao Phuket tato ho ato ary zoo tsy manam-paharoa izay onenan'ny tigra ihany. Miaraka amin'izy ireo, afaka miditra amin'ny fifandraisana akaiky ianao - hanatona, hifandray, hikasika, maka sary. Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia faly amin'izany.
Ny tigra amin'ny sokajin-taona rehetra dia voatahiry ao amin'ny sela maro. Ny fidirana amin'ireo tsirairay amin'izy ireo dia aloa miserana. Ny vidiny dia hafa noho ny sela samihafa. Ny fidirana amin'ny vavan'ny tigra kelikely dia lafo indrindra. Na izany aza, misy safidy manana fitsidihana feno roa amin'ireo sela roa na mihoatra amin'ny fandoavana iray.
Mino amin'ny mpizahatany fa "voatondraka" miaraka amin'ny fanafody ny tigra ary noho izany antony izany dia tena tony izy ireo. Na izany aza, mandà izany ny tompon'ny Fanjakan'ny Tigra, ka manazava fa ny biby dia ny biby nocturnal (toa ny saka rehetra), hany ka malahelo foana mandritra ny andro.
Ao amin'ny faritanin'io zavatra io dia misy kafe iray miasa ao amin'ny endrika buffet (araka izany 450 baht isaky ny olona). Raha tsy misy olona maka sary aminao ny tigra, ny fanjakan'ny tigra dia afaka manome ny mpaka sary aminy. Mitentina 500 baht. Ny zaza latsaky ny 15 taona dia ampidirina sela amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana mialoha avy amin'ny mpiasan'ny Fanjakana. Matetika ny andalana lava amin'ny antoandro, no tsara raha tonga maraina.
Fa azonao atao raha tsy izany. aza mandoa 500 baht ho an'ny mpaka sary, fa ho an'ny 200 baht manontany mpiasa na inona na inona dia maka sary ho anao izy.
Ny fandaharam-potoana sy ny vidiny Tiger
Ny fidirana mankamin'ny faritry ny Fanjakan'ny tigra dia mendrika 2500 baht mety hafitoana isan-kerinandro from 9 to 18.
Sakafo (Buffet) - 450bat
Mpaka sary tsirairay amin'ny fizahan-tany manontolo - 500bat
Ny vidin'ny fidirana ao anaty tranomaizina dia voafaritry ny vanin'ireo tigra ao anatiny, ary koa ny serivisy voafantina voafantina, ary eo anelanelan'ny 900 - 3 baht.
Ity trano ity dia miorina ao Kathu.
Address: 118/88 Moo 7, Kathu, Phuket, Thailand
telefaonina: + 66 76 323 311
Tranon-tsonga tigra: https://www.tigerkingdom.com/
Asongadino amin'ny sarintany ny navigateur - https://goo.gl/maps/7MWGRnBDQ23pNt349
Ho avy, ny safidy mahasoa indrindra dia ny fampiasana serivisy serivisy malalaka.
Azo atao ny mandefa fifindrana amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny Governemanta na amin'ny alàlan'ny telefaona. Ny fahazoana fitsangatsanganana miaraka amina famindrana amina masoivoho iray dia mihena ny vidiny.
Fanjakan'ny tigra (fanjakan'i Tiger) amin'ny sarintany
Fanjakan'ny tigra (fanjakan'i Tiger). Sary sy horonan-tsary
Hevitra ho an'ny Fanjakan'ny Tigra ao Phuket (famerenana Google)
Fanjakan'ny Phuket momba ny Tigers Reviews (Tripadvisor.com)